Ny androaniko | 8
[Hira ] 09 Desambra, 2017 13:34
Ny iray minitra tsy eo anilanao dia toy ny zato taona.
Ilay hira efa miezinezina, ny nihira sy ny nitendry dia tanora dia tanora tokoa fa miofana ho matihanina amin'ny mozika.
Kapo-batana tsisy fanomanana izy ity fa dia ngolingoly izahay nanatrika.
"Rehefa aty an-tany lavitra, hoy izy, dia ny an'ny tena no asandratra ambony".
Misaotra Richard sy Rindra !
[Ankapobeny ] 03 Desambra, 2017 14:37
​Tena mino ve ianao fa efa nahita azy ​nihanjaka satria nanala akanjo izy ?
Lazao ahy izay mba nofiny.
Lazao ahy izay nahavaky ny fony.
Inona ny tena mahaliana azy ?
Inona ny mba mampitomany azy ?
Tantarao ahy ny fahazazany.
Eny, ambarao tantara iray momba azy aho ary tsy ao anatiny ianao.
Hitanao ny hodiny, ary nokasihanao ny vatany.
Kanefa dia hainao toy ny boky hitanao teny ho eny fotsiny izy, saingy tsy nosokafanao mihitsy.
Ny tena fiarahana dia tsy ara-batana fotsiny.
Ny tena fiarahana dia mahay mamantatra ny antsipirihan'ny iray, dia mitia azy fotsiny ary mitombo fitiavana azy noho izany.
[nahita aho dia nandika azy tamin'ny fiteny malagasy ]
[Ankapobeny ] 12 Novambra, 2017 12:26
Fitenindreny sy fiteny nibeazana ary fiteny nahalehibe.
Eto am-pandaminana ireto sary sy horonana marobe ato anaty solosaina aho dia mba avoakako ity fa isan'ny mba tiako zaraina : mpinamana vitsy dia vitsy izahay nandeha nifampizara fifaliana nanodidina ny sakafo sinoa taorian'ny nanamasinana ho diakra an'i Lalatina, pretra zezoita, tamin'ny 2011 teto Roma.
Ny fanaon'ny Fikambanandrizareo dia fialana hetaheta kely aorian'ny lamesa fanamasinana ary ny ampitso izy ireo dia manao sakafo lehibe anasany olona 10 - fianakaviana avy lavitra na eto an-toerana, na koa namana akaiky sy mpiara-monina ho an'izay tsy manana fianakaviana akaiky nanotrona tamin'ny fotoan-dehibe. Ka ity fiarahanay ity dia tena izahay mpinamana ireo no nanohy ny takariva nony vita ny fialana hetaheta niarahan'ny daholobe.
Tsy diso anjara moa ny kabary kely mahazatra antsika Malagasy rehefa toa izao. Kanefa nisy namana vahiny iray teo anivonay ka dia i Mialy no nangatahana handika teny. 14 taona izy teto. Ny teny italianina no tena manavanana azy. Tsy hoe tsy mahay fiteny malagasy izy fa io aza no hany teny nampiasainy tamin'ny 3 taona voalohany tamin'ny fiainany fa efa niditra garabola izy vao niboredika nanomboka ny fiteny italianina (indraindray kivy ireo mpampianatra fa tsy hainy zay tadiavin'ilay zaza satria miteny gasy izy - hihihi).
Izaho rahateo tsy nanao amboletra mihitsy fa rehefa miresaka izahay ao an-trano dia miasa ny teny roa. Roa taona izy no tany amin'ny garabola italianina dia nanohy tany amin'ny sekoly frantsay nony ambaratonga fototra ka hatramin'ny nahazoany ny bakalorea. Karazana fiteny telo izany no tena nibahana tamin'ny fiainany : ny malagasy izay fitenindreniny, ny frantsay fiteny nibeazany tany an-tsekoly ary ny italianina fiteny nahalehibe azy.
Izy rahateo tsy mitovy toetra amiko petsana sy pelika ity fa milamina sy tsy dia be teny izay. Tsy mitoka-monina koa anefa. Fa isan'ny tena tsy tiany ny "manery" azy hiteny malagasy fa ny azy dia misoratra eny amin'ny handrinao olona iresahany ny fiteny ho ampiasainy. Rehefa tena hitany fa sady tsy mahay miteny italianina no tsy miteny frantsay ianao vao miezaka miteny malagasy izy. Kanefa hainy tsara koa fa ny Malagasy hiringiriny avy any Madagasikara mivahiny aty dia mahay teny frantsay. Ary tsy tairina mihitsy izy fa avela amin'ny nahim-pony fa lasa izy mandeha raha terenao hoe "mba valio amin'ny teny malagasy aho ho'aho !" - zavatra tena tsy zakany iny.
Tamin'ny 2003 izahay mianaka nankany an-tanindrazana iray volana fa narary ny renibeny. Niteny gasy madio be izy navelako irery niaraka tamin'ireo zana-drahavaviko satria izaho tany amin'ny hopitaly isan'andro isan'andro nandritra ny fotoana rehetra naha-tany anay. Tamin'izany dia hainy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ireny hiran'i Tempo Gaigy ireny (ramose tantantan, ora iray tsy miverina, misaotra foana foana, ...), ry Ndondolah sy Tahiry (aza ampirafesina, ...), ry Tif à Tif (sipasipako, ...) sy ireo tsy tadidiko daholo.
Ka tamin'ity takariva ity dia tena tsy nandà izy na indray mandeha aza, nony nataonay hoe indry izany mandika teny ho an'i Pina fa izy tsy mahay teny malagasy. Nanao tokoa izy satria hitany hoe nandeha tamin'ny fo ny fangatahanay fa tsy namandrika azy, tsapany fa tsy hanadinana azy raha mahay fiteny malagasy izy no tanjona teto. Nisy ihany fehezanteny vitsivitsy tsy hitany ny handikana azy na dia hainy aza ireo teny ao anatiny.
Dia finaritra ahy erý aho eto miverina mijery azy ity. Soa fa voatahiry
[Ankapobeny ] 25 Aogositra, 2017 11:26
Miteraha hahita, hoy ny Ntaolo.
Ity blaogiko ity no be mpitsidika kokoa noho ilay amin'ny teny frantsay, ka tsy maninona fa aleo ato no zaraiko ity horonantsary ity sao mahasoa ny hafa (adiny iray sy sasany ny halavany fa makà fotoana tsara).
Namana iray no nanoro ahy azy ity, tohin'ny resadresaky ny samy reny .
Tsoriko fa vao nanomboka aho dia kenda. Teo amin'ny minitra faha-10 aho dia niala mihitsy aloha. Haka bahana hanohy rehefa mahazoazo angovo indray.
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 52 53 54 Manaraka»